Eyona midlalo yebhodi yokudlala indima eli-15 | Ndinike ixesha lokuphumla
UIsake | 20/12/2021 15:56 | Ukuhlaziywa ukuba 20/12/2021 16:01 | ngokubanzi
Los imidlalo yebhodi yokudlala indima idinga ukukhankanywa ngaphandle eminye imidlalo yebhodi, kuba zibekwe njengenye yezona zinto zikhobokisayo kwaye zikhethwa ngabasebenzisi abathile. Baze ukuvelisa inzondelelo yempambano enkulu, kunye nabalandeli abanxiba njengabalinganiswa bale midlalo, abayila eyabo i-3D-eprintiweyo okanye iiseti ezenziwe ngezandla, abayila kwaye bapeyinte imifanekiso yabo, njl. Bade baqhankqalaza abantu abaninzi ababengengabo iincwadi, baphucula amandla engqondo, imvakalelo yentsebenziswano, njl.
Wonke umkhuhlane oza ngokuchanekileyo kwinto eyenza le midlalo yahluke, kwaye kunjalo ukuntywila komdlali omkhulu oko kuvumela. Le midlalo ibalisa ibali, iseti umdlalo, kwaye abadlali bangabalinganiswa abamele bangene kwindima okanye indima, kungoko igama labo. I-adventure yabo bafuna ukuphila iimeko ezinomdla kunye neeadventures ezimangalisayo.
1 Isikhokelo sokukhetha eyona midlalo ibalaseleyo yokudlala indima
1.1 Amaqula kunye needragons
1.2 Iliso elimnyama
1.5 Imihlaba engavumelekanga
1.6 Ilivo lamakhonkco ama-5
1.7 Indawo eGloom 2
1.8 Ukuwa kweAvalon
1.9 INkosi yeRings: Uhambo lokutyhutyha uMbindi woMhlaba
1.12 Iphupha elibi: Iziganeko ezoyikisayo
1.13 UArhamham wayethusa
2 Yintoni iRPG?
3 Iindidi zemidlalo yokudlala indima
4 Indlela yokukhetha umdlalo ofanelekileyo wokudlala indima
Isikhokelo sokukhetha eyona midlalo ibalaseleyo yokudlala indima
Phakathi kwezinye ze eyona midlalo yebhodi yokudlala indima emangalisayo onokuthi uthenge, kwaye abona bathengisi babalaseleyo kolu didi, baquka:
Amaqula kunye needragons
Imigodi kunye neeDragons...
Izixhobo eziyimfuneko zeDungeons ...
Ngomnye wemidlalo yebhodi edlala indima ngokugqwesileyo. Enye yezona zixhaphake kakhulu kwihlabathi. Ngumdlalo wentsebenziswano ongefani okuntywiliselayo kwindalo yonke enomlingo. Ifanelekile ukusuka kwiminyaka eyi-10 ubudala, kwaye ingadlalwa phakathi kwe-2 kunye ne-4 yabadlali. Kuyo kuya kufuneka ukhethe umlingiswa wakho kwaye ulwe nezilo eziyimiqondiso, kwaye uphile i-adventure entsha ngokupheleleyo ngalo lonke ixesha, kuba ukwenza izigqibo kunye nethuba kuthetha ukuba akusoloko kufana. Ukongeza, into entle kukuba uya kufumana iincwadi ezininzi ezinamabali ahlukeneyo kunye nemixholo onokukhetha kuyo okanye uqokelele.
Thenga iDungeons & Dragons I-adventure iqala Thenga i-Essential Starter Kit
Yenye yeeklasikhi, kwaye sele kungamashumi eminyaka ukusukela oko kwasungulwa lo mdlalo waseJamani. Ushicilelo lwesi-5 luguqulelwe kwisiSpanish, ukuze abalandeli apha bakwazi ukonwabela i-adventures emnandi e-Aventuria, ilizwekazi eligcwele iintsomi, abalinganiswa abangaqondakaliyo, izilo kunye nezidalwa ezingaqhelekanga, kwaye apho abalinganiswa baya kudlala amaqhawe.
Thenga Iliso Elimnyama
Devir Pathfinder. Imigaqo...
Esi esinye isihloko sesinye sezona midlalo zaziwa kakhulu zokudlala indima. Kuyo, umdlali ngamnye uya kuba nendima yomntu ohambahambayo ekufuneka asinde kwihlabathi elimangalisayo eligcwele umlingo nobubi. Incwadi ibandakanya imigaqo yomdlalo, umlawuli womdlalo, kunye nemithetho yokudala abalinganiswa abamangalisayo, ukhetho lokupela, njl. Umdlalo ofanelekileyo onokuthi uqalwe ngokunikwa ubulula bawo.
Umdlalo wokudlala indima yeWarhammer ...
IWarhammer idinga iintshayelelo ezimbalwa, iyaziwa kwihlabathi lomdlalo wevidiyo kunye naphakathi kwemidlalo yebhodi yokudlala indima. Umdlalo wefantasy osikhumbuza ngeWoW okanye iWarcraft ngandlela thile, njengoko ikuhambisa kwilizwe elidala le-gothic elilawulwa zizidalwa ezoyikisayo, amaqhawe, iimfihlakalo kunye neengozi.
Imihlaba engavumelekanga iQuetzel...
Yenziwe yiFree League Publishing, inika amava amnandi kweyona ndlela icocekileyo yesikolo yakudala. Ngoku iza kuhlelo lwayo olutsha kunye noomatshini abatsha ukuze baphile kwi-adventures kwiMihlaba eNgavumelekanga. Kule meko, abadlali abadlali amagorha, kodwa abakhohlakeleyo nabahlaseli abaya kwenza nantoni na ukuze baphile kwihlabathi eliqalekisiweyo apho abemi balo bengenako ukwahlula phakathi kwenyani kunye nentsomi.
Thenga imihlaba engavumelekanga
Ilivo lamakhonkco ama-5
Imidlalo yeNqwelomoya yeFantasy-I...
I-Need Games idale lo mdlalo webhodi ye-RPG ngokusetwa okusekwe kwintelekelelo yasempumalanga. Ibekwe eRokugan, indawo yentelekelelo kwi-feudal Japan. Ukongeza, ibandakanya ezinye iimpembelelo zaseTshayina, kwaye oko kukubeka kwizihlangu ze-samurai, i-bashi, i-shugenja, iimonki, njl.
Thenga ilivo lezangqa ezi-5
Indawo eGloom 2
IGloomhaven 2nd Edition -...
Uhlelo lwesibini lweGloomhaven nalo luguqulelwe kwiSpanish. Lo mdlalo awungowona ucetyiswayo ukuba uqale kwihlabathi lokudlala indima, kodwa ujolise ngakumbi kwiingcali. Umdlali ngamnye uthatha indima ye-mercenary entywiliselwe kwihlabathi leentsomi eliguqukayo. Ngokudibeneyo baya kusebenzisana kwaye balwe kumaphulo ahlukeneyo atshintshayo ngokuxhomekeke kwizenzo ezithathiweyo.
IGrail Engcolisiweyo: Ukuwa ...
Enye izihloko zeengcali. Esi sihloko sokudlala indima sidibanisa iintsomi ze-Arthurian, i-Celtic mythology, kunye nebali elinzulu kunye ne-branching elivumela imingeni ukuba isondele ngeendlela ezahlukeneyo ngexesha ngalinye umdlalo udlalwa. Kuya kufuneka wenze izigqibo ezinzima kakhulu, kunye nezinye ezibonakala zingabalulekanga, kodwa zinokutshintsha izinto kakhulu ekuhambeni kwexesha. Ulungile?
Thenga Ukuwa kweAvalon
INkosi yeRings: Uhambo lokutyhutyha uMbindi woMhlaba
Isihloko se-JRR Tolkien asizange sibe yifilimu kunye nomdlalo wevidiyo kuphela, siphinde siza njengomdlalo webhodi odlala indima kunye nale phakheji. Kuyo uzintywilisela kuhambo lokutyhutyha uMbindi-Earth, kunye nee-adventures kunye nabona balinganiswa basentsomini bale saga. Amandla omdlalo ahlulwe abe ngamaphulo, kunye nemilinganiselo, ukuze ikothuse nokuba udlala ngokuphindaphindiweyo ...
Thenga iNkosi yeRings
Emva kothuthu lweMfazwe Yehlabathi I, isixeko sobungxowankulu esaziwa ngokuba yiLa Fábrica siye savala iingcango zaso, satsala umdla wamazwe athile asebumelwaneni. Inyani efanayo yasekwa ngo-1920 nalapho umdlali ngamnye aya kudlala ummeli wamaqela amahlanu aseMpuma Yurophu, ezama ukufumana ubutyebi kunye nokubanga umhlaba ojikeleze iFactory engaqondakaliyo.
Ubumnyama obukhulu bubonelela ngamava amnandi kakhulu kwisitayile sokwenyani seklasiki. Umdlalo webhodi wangoku, ogcwele intshukumo kunye nemidlalo emincinci emangalisayo kunye nomdlalo olula kakhulu. Igxininisa kwizenzo zamaqhawe, ngaphandle kwesidingo sokuba umdlali enze njengesikhokelo sokulawula iintshaba.
Iphupha elibi: Iziganeko ezoyikisayo
Diset- Nightmare- Umdlalo ...
Iqhinga, ingqiqo, ukuyila, intsebenziswano ... zonke zixutywe kwi-adventure eyoyikisayo apho uzintywilisela kwihlabathi eligcwele izinto ezimangalisayo kunye neemfihlakalo. Umdlali ngamnye uya kudlala indima yonyana kaCrafton, kwaye kufuneka afumanise ukuba ngubani owabulala utata wakhe ngokuphanda imikhondo yendlu endala yosapho.
Umdlalo oyoyikisayo kunye nomdlalo othatha indawo oya kwisixeko sase-Arkham, esoyikiswa zizidalwa ezivela kubomi basemva kokufa. Abadlali kuya kufuneka badibanise imikhosi, bethatha indima yabaphandi, ukusindisa imeko ebeka umhlaba wonke emngciphekweni. Injongo kukuqokelela imikhondo kunye nezixhobo eziyimfuneko ukujongana naMandulo kunye nokuthintela izicwangciso zabo ezimbi.
Lo mdlalo odlala indima unomxholo we-cyberpunk, kwindawo apho iteknoloji iqhubele uluntu kwimida yayo, kwaye apho kunzima khona ukwahlula phakathi kokwenyani kunye nokwenyani. Ke ngoko, kufuneka ukhokele ukuchasana (nangona inxenye yomzimba wakho inomatshini ...) ukuzama ukubeka imida kwitekhnoloji eyenze umonakalo omkhulu. Iye yakhuthazwa yimisebenzi edumileyo efana neBlade Runner, iAltered Carbon, kunye neThe Expanse.
Umfanekiso wasimahla (uMdlalo weBhodi yaBantwana) ukusuka https://torange.biz/childrens-board-game-48360
Kwabo bangekayazi yintoni umdlalo webhodi odlala indimaNgumdlalo ofanayo ngandlela thile neminye imidlalo, kodwa apho abadlali kuya kufuneka badlale indima okanye indima. Ukwenza oku, inesakhiwo esisisiseko:
Umlawuli womdlalo: Xa ikhosi yokudlala indima iqala, isoloko ijongwa ngomnye wabadlali abaza kusebenza njengomlawuli okanye umphathi womdlalo. Uyisikhokelo kunye nombalisi womdlalo, lowo uchaza izigcawu, inxalenye esisiseko eya kuxela ibali kwaye isebenze njengomlamli phakathi kwabadlali abathatha inxaxheba. Ukongeza, unokudlala abalinganiswa abangabonakaliswa ngabanye abadlali, njengabalinganiswa besibini. Enye indima yenqununu kukuthwala uxanduva lwemithetho elandelwayo. Ukwenza oku, iya kuba yiyo enencwadi yomdlalo ngamaxesha onke.
Abadlali: baya kuba ngabanye abathatha ezinye iindima okanye iindima ezahlukileyo kumlawuli womdlalo, odlala ngokubanzi amaqhawe ebali. Umdlali ngamnye uya kuba nephepha lomlinganiswa, elineempawu, izakhono kunye nezinye iinkcukacha ezifanelekileyo zomlinganiswa abamkhethileyo. Unokubandakanya nezinye iinkcukacha ezifana nempahla oyinxibileyo, izixhobo, izakhono, imbali yakho, izinto zamandla, njl.
IMaphu: basebenzela ukubeka abalinganiswa ngexesha lomdlalo. Zingaba yi-cartographic, iibhodi, okanye izigcawu ze-3D, izigcawu zangempela, iipropu kunye nokuhlobisa, njl.
Ngayo yonke le nto, umdlali uya kuthatha isigqibo, kunye idayisi ithuba inkxaso, zeziphi izenzo ozenzayo kunye nomlingiswa wakho, kwaye umlawuli womdlalo uya kuthatha isigqibo sokuba ezo zenzo zingenziwa okanye hayi, ubunzima, kwaye imigaqo iyahlonishwa. Ngaphaya koko, inkosi iya kuthatha isigqibo sokuba zeziphi na izenzo ezithathwa zii-NPC okanye abalinganiswa abangengabo abadlali.
Kwakhona kubalulekile ukuqaphela ukuba imidlalo yebhodi yokudlala indima bayasebenzisana, hayi ukhuphiswano njengeminye imidlalo. Ke ngoko, abadlali kuya kufuneka basebenzisane.
Iindidi zemidlalo yokudlala indima
Phakathi iintlobo kunye nokwahluka imidlalo yebhodi yokudlala indima yezi ndidi zilandelayo:
Ngokutsho udlala kanjani kumdlalo wokudlala indima, unokwahlula phakathi:
Itheyibhile: zeziphi ezi zichazwe kweli nqaku.
Phila: oko kunokwenziwa kwimimiselo yendalo, izakhiwo, njl., ngeempahla okanye i-makeup yeempawu.
Ngeposi- Zinokudlalwa ngokutshintshana kusetyenziswa ii-imeyile, nangona ingeyiyo eyona ndlela ilungileyo okanye eyona ikhawulezayo. Ngoku i-imeyile kunye nosetyenziso lomyalezo olukhawulezileyo luyikhawulezisile le nkqubo.
Imidlalo yevidiyo ye-RPG: inguqulelo yedijithali ye-tabletop edlala indima yemidlalo.
Ngokutsho kwe umxholo okanye isimbo kumdlalo wokudlala indima, ungafumana:
Imbali: ngokusekelwe kwiziganeko zokwenyani kwimbali yoluntu, njengeemfazwe, ukuhlasela, amaXesha Aphakathi, njl.
Ubungqina: bahlala bexuba iinxalenye zembali, ngokubanzi ukusuka kwi-Middle Ages, kunye neempawu zefantasy, ezifana nokufakwa kwee-wizards, iitroli, ii-orcs, kunye nezinye izidalwa zasentsomini. Umzekelo, i-epic-medieval fantasy RPGs.
Unkwantyo noloyiko: enye imixholo yabathandi bolu hlobo lomxholo, kunye nemfihlelo, ubuqhetseba kunye noloyiko. Imisebenzi ye-HP Lovecraft iye yaphefumlela abaninzi kubo. Ukongeza, uya kuzifumana ziziporho, izilo ezikhulu, ii-zombies, ii-vampires, ii-waswolves, izidalwa ezivela kwiilabhoratri zesayensi okanye uphando lwasemkhosini, njl.
Uchrony: enye into eyinyani, ebonisa ukuba isiganeko sokwenyani sinokuba njani ngokwenye imbono. Umzekelo, beliya kuba njani ihlabathi ukuba iJamani yayiphumelele iMfazwe Yehlabathi II, njl.
Iintsomi zexesha elizayo okanye intsomi yenzululwazi: ngokusekelwe kwikamva lomntu, okanye esithubeni. Kukho izinto ezininzi ezahlukeneyo apha, ezinje ngemidlalo esekwe kwihlabathi le-post-apocalyptic, kwikholoni yeeplanethi, i-cyberpunk, njl.
I-Space Opera okanye i-epic-space fantasy: i-subgenre enxulumene nengaphambili, kodwa apho intsomi yesayensi isisithako esinye solungiselelo. Umzekelo unokuba yindalo eyintsomi ye-Star Wars, apho kukho intsomi yesayensi, kodwa yenzeka kwixesha elidlulileyo lasentsomini.
Indlela yokukhetha umdlalo ofanelekileyo wokudlala indima
Khetha umdlalo olungileyo Itheyibhile yokudlala indima ilula kakhulu, kuba kufuneka ugxininise kumanqaku amaninzi abalulekileyo, njengale:
Ubudala: kubaluleke kakhulu, njengakweminye imidlalo yebhodi, ukuba iminyaka eyilelwe yona ichongiwe. Akunabo bonke abanomxholo ofanelekileyo kubo bonke ubudala, njengoko banokubandakanya imifanekiso yabantu abadala, amagama amabi, kwaye anzima kakhulu kubantwana. Kubalulekile ukuchonga ukuba yeyiphi na imigangatho yobudala abaza kuyidlala, kwaye uye kwezifanelekileyo.
Inani labadlali- Enye into ekufuneka iqwalaselwe linani labadlali ababaxhasayo. Ukuba uza kudlala nabahlobo abaninzi okanye usapho, kubalulekile ukuba abadlali abaneleyo okanye amaqela amkelwe, ukuze kungabikho mntu ushiywe ngaphandle.
Umxholo: lo ngumcimbi wokungcamla, kwaye kufuneka ukhethe eyona ilufaneleyo ukhetho lwakho. Kukho intsomi yesayensi, uhlobo lweedragons kunye nemigodi, enomxholo we-cyberpunk, i-apocalyptic, njl.
Amathuba okusasazwa: Uninzi lwemidlalo yokudlala indima ibandakanya ukusebenzisa ibhodi okanye ayifuni nto ikhethekileyo. Nangona kunjalo, ezinye zinokufuna indawo eyongezelelekileyo yokusabalalisa, okanye izinto ezongezelelweyo. Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo amathuba akho kwaye ukuba unokudlala ngokufanelekileyo umdlalo wokudlala indima kwindawo onayo kunye nezixhobo onazo, ukuba zinokudlalwa kwiindawo ezivulekileyo, njl.
Umthamo wokwenza ngokwezifiso: eminye imidlalo edlala indima ixhasa umgangatho ophezulu wokwenza ngokwezifiso, ukukwazi ukongeza abalinganiswa bakho okanye amanani, ukwenza imihlobiso yokusetyenziswa njengebhodi yomdlalo, njl. Abenzi kunye nabathandi be-DIY kunye nemisebenzi yezandla, ngokuqinisekileyo bakhetha olu hlobo lwemidlalo yokudlala indima, eya kubanceda baphuhlise ubuchule babo kunye nokucinga ukuba benze iinguqulelo zabo. Umzekelo, ezinye ziquka nje incwadi enemiyalelo kunye nebali, kunye nesetingi senziwe nguwe. Ezinye zinokubandakanya okubizwa ngokuba ziimodyuli okanye iimeko ezenza umsebenzi wakho ube lula.
Imidlalo yobuchwephesha bokudlala indima: ezinye zintsokothile ngandlel' ithile kwaye zijolise ngakumbi kwiingcali zolu hlobo lodidi. Nangona abantu abangafundanga banokufunda kwaye babe ziingcali, kodwa basenokungabi ngabo balungileyo ukuqalisa ngabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndinike ixesha lokuphola » ngokubanzi » Eyona midlalo yebhodi yokudlala indima